Kudzingwa panguva yekuedzwa | Law & More B.V.
Blog » Kudzingwa panguva yekuedzwa
Kudzingwa panguva yekuedzwa
Munguva yekuyedza, mushandirwi nemushandi vanogona kusvika pakuzivana. Mushandi anogona kuona kana basa nekambani zvaari kumufarira, nepo mushandirwi achiona kana mushandi akakodzera basa racho. Nehurombo, izvi zvinogona kutungamira mukudzingwa kwemushandi. Anogona here mushandirwi kudzinga mushandi nekuda kwechimwe chikonzero mukati menguva yekuyedzwa? Mune ino blog chinyorwa tinotsanangura zvatinotarisira semushandi kana mushandirwi. Tichatanga takurukura kana nguva yekuyedza yasangana nezvinodiwa pamutemo. Tevere, iyo mitemo ine chekuita nekudzingwa panguva yeiyedzo inokurukurwa.
Nguva yepamutemo yekuyedza
Sezvo zvinodiwa zvakasiyana zvinoshanda pakubviswa mukati menguva yekuedzwa pane kudzingwa kunze kwenguva yekuyedzwa, zvinonyanya kukosha kuti nguva yekuyedza inosangana nezvinodiwa nemutemo. Kutanga, iyo nguva yekuyedza inofanirwa kunge yakafanana kune ese mapato. Kechipiri, nguva yekuyedza inofanira kubvumidzwa mukunyora. Izvi zvinogona kubvumiranwa, semuenzaniso, muchibvumirano che (pamwe) chevashandi.
Kureba kwenguva yekuyedza
Uye zvakare, iyo nguva yekuyedza haifanire kunge yakareba kupfuura inotenderwa zviri pamutemo. Izvi zvinoenderana nenguva yechibvumirano chebasa. Semuenzaniso, mutemo unoti hapana nguva yekuyedza inogona kushanda mune kontrakiti yebasa yemwedzi mitanhatu kana pasi. Kana chibvumirano chebasa chine nguva isingasviki gore rimwe, asi chakareba kupfuura mwedzi mitanhatu, unosvika mwedzi mumwe unoshanda. Kana chibvumirano chapera kwemakore maviri kana kupfuura (semuenzaniso kwenguva isingazivikanwe), inguva yakareba yemwedzi miviri inoshanda.
Nguva yekuyedza mukondirakiti nyowani yebasa neyeiye mushandirwi
Zvinotaridzawo kubva pamutemo kuti nguva yekuyedza muchibvumirano chitsva chebasa nemushandirwi mumwe chete haibvumirwe, kunze kwekunge chibvumirano chitsva chebasa chave kuda hunyanzvi hwakasiyana kana mabasa. Nguva nyowani yekuyedza haigone kuverengerwa kana basa rimwe chete riine chinomutevera mushandirwi (semuenzaniso wenguva pfupi basa) Mhedzisiro yeiyi ndeyekuti, nekuda kwemutemo, nguva yekuyedza inogona, musimboti, kungobvumidzwa kamwe chete.
Nguva yekuyedza haisati yasangana nezvinodiwa pamutemo
Kana nguva yekuyedza ikasasangana nezvinodiwa zviri pamutemo (semuenzaniso nekuti yakareba kupfuura inobvumidzwa), inoonekwa seisina maturo. Izvi zvinoreva kuti nguva yekuyedza haipo. Izvi zvine mhedzisiro yechokwadi chekudzingwa, nekuti iyo mitemo yenguva dzose yepamutemo pakubviswa shandisa. Izvi zvinoenderana nezvinodiwa zvakanyanya pane kudzingwa panguva yeiyedzo.
Kudzingwa mukati menguva yekuedzwa
Kana nguva yekuyedza ikasangana nezvinodiwa zviri pamutemo zvinotsanangurwa pamusoro, chirongwa chinodzora chinodzora chinoshanda. Izvi zvinoreva kuti kondirakiti yebasa inogona kumiswa chero nguva mukati menguva yekuyedza pasina chikonzero chepamutemo chekudzingwa. Nekuda kweizvozvo, mushandi anogona zvakare kudzingwa panguva yekuyedzwa pachiitiko chekurwara, semuenzaniso, uye haana mvumo yekureba nguva yekuyedzwa mune ino kesi. Pakumisa chibvumirano chebasa, chirevo chemumuromo chakakwana, kunyangwe zvichisarudzika kuratidza izvi nekunyora. Kubviswa kwechibvumirano chebasa panguva yekuyedzwa kunogona kuitwa pasi pemamiriro aya kune vese mushandi nemushandirwi. Izvi zvinogoneka zvakare kana mushandi asati atanga basa rake. Kana zvikaitika kudzingwa mukati menguva yekuedzwa, mushandirwi haasungirwe kuenderera achibhadhara mibairo uyezve (kunze kwemamiriro ekumanikidza) haamanikidzirwe kubhadhara zvinokuvadzwa.
Mushandirwi haasungirwe kupa zvikonzero paanogumisa chibvumirano chebasa. Zvisinei, pachikumbiro chemushandi, mushandirwi anofanira kutsanangura izvi. Izvi zvinoshandawo kumushandi kana iye mushandirwi achida chikonzero chekumiswa. Zvinokurudzira kudzingwa kwacho zvinofanirwa kupihwa zvakanyorwa.
Mvumo kune mabhenefiti
Kana mushandi akasarudza kusiya basa panguva yekuyedzwa, iye haana mvumo yekubatsirwa neWW. Nekudaro, iye kana iye angave aine kodzero yekuwana rubatsiro rwemagariro rubatsiro kubva kumasipala. Kana mushandi akadzingwa basa nekuda kwekurwara, anogona kuve nekodzero yekubatsirwa pasi peSickness Benefits Act (Ziektewet).
Zvisinei, mushandirwi anosungirwa kutevedzera kurambidzwa kwerusarura paanomisa chibvumirano chebasa. Naizvozvo, mushandirwi haakwanise kumisa chibvumirano maererano nehunhu (semuenzaniso kubata pamuviri), rudzi, chitendero, maitiro, kuremara kana chirwere chisingaperi. Nekudaro, zvakakosha pano kuti kumiswa mukati menguva yekuyedzwa panguva yekuzvitakura kana chirwere chisingaperi kunotenderwa maererano nechikonzero chakadzingwa.
Kana kudzingwa kwacho kune rusarura, kunogona kubviswa nedare repasi. Izvi zvinofanirwa kukumbirwa mukati memwedzi miviri mushure mekudzingwa. Kuti chikumbiro chakadai chipiwe, panofanirwa kuve nekukanganisa kwakanyanya kune iwo mushandirwi. Kana dare rakatonga richitsigira mushandi, mushandirwi ane chikwereti chemubhadharo, sezvo ziviso yekudzingwa ichionekwa seisina basa. Mushandirwi haasungirwe kuripa zvakakanganiswa. Panzvimbo pekudzima, zvinokwanisika, muchiitiko chekugumisirwa nerusarura, kukumbira muripo wakaringana mune iyo kesi hapana kuzvidzwa kwakakomba kunofanirwa kuratidzwa.
Uri kutarisana nekudzingwa here kana kuda kudzinga mushandi panguva yekuyedzwa? Kana zvirizvo, ndokumbirawo ubate Law & More. Magweta edu nyanzvi mumutemo wezvemabasa uye vanofara kukupa rairo yemutemo kana rubatsiro panguva yekutongwa. Iwe une chero mibvunzo nezve edu masevhisi kana nezve kudzingwa? Mamwe mashoko anogonawo kuwanikwa pane yedu saiti: kudzingwa.site.
Previous Post Kubviswa uye nguva dzekucherechedza
Next Post Maitiro ekubvunza ku Enterprise Chamber